Ogaden News Agency (ONA) – Xasuqi Gunagado: Deegaanadi ku dhowaa Gunagado oo Gabi ahaanba laga qaxay.
Deeganadii xidhiidhka la lahaa gunagado ayaa laga qaxay sida Wargaadsan, Ballisareedo,boodhlay iyo meelo kale oo ka ag dhow Magaalada Gunagado. Sababta qaxa waxay ku sheegeen culays kaga yimid qoladii hawaarinta oo horsocda Ciidamada Woyanaha. Iyaga oo goobahaas dadka laga baro kiciyay laga geystay tacadiyo iyo xasuuq ka dhan ah Xeerarka Caalamiga ah ee Qaramada Midowbay.
Xasuuqi Ka bilowday 12 Febraayo Magaalada gunagado ayaa wali illaa hadda ka socda Magaalada Gunagado iyo deegaamada ka ag dhow iyaga oo ciidamada Tigreega oo horsocdaan kuwa hawaarinta ahi ay geysteen dilal, xidhay iyo boob hantiyeed.
Masuliyiinta TPLF oo soo Gaadhay Jig-Jiga
Xasuuqa ka socda Ogadeniya ayaa bishan Febraayo kusii xoogaystay dhulka Somalida Ogadeniya. Waxaana waqtigan kusugan Magaalada Jig-jiga Masuliyiinta Xisbiga TPLF ee ka taliya wadanka Ethiopia. Waxaana ay u badantahay inay iyaga yihiin dadka amarka ku bixinaya in labaro kiciya oo lasoo celiyo xasuuqi sanadkii 2007 ilaa 2008 lagu baro kiciyay deegaamo badan oo kamid ah dhulka Somalida Ogadeniya.
Wararka kasoo kordha Xasuuqan iyo barakicintan iyo ujeedada madaxda Sare ee TPLF kusoo booqdeen Jig-jiga waxa kusoo qaadan doona wararka Gudaha.